Ungakhansela Kanjani Ukubhaliswa KweDisney Plus? - Ezokuzijabulisa
I-Disney Plus iyisiteji sokusakaza esibe ngenye ye isevisi ehamba phambili yokusakaza abahlinzeki. Bane- iqoqo elikhulu lama-movie nochungechunge lwe-TV ukuze uthande ukubuka. Kepha uma uzwa ukuthi insiza akuyona le obukade uyifuna, ungayikhansela noma kunini. Ukugwema ukukhokhiswa okungafuneki, udinga ukuyikhansela ngaphambi kokuphela kosuku lokukhokha.
Ungabukhansela kalula ubulungu bakho usebenzisa isiphequluli sakho sewebhu. Ukubhaliselwa kwakho kweDisney Plus kuzohlala kuze kube sekupheleni kosuku lwakho lwamanje lokukhokha okusho ukuthi usazokwazi ukubuka noma yini oyikhokhele ngisho nangemva kokukhansela okubhalisile.
Imvamisa, ukubhaliswa kweDisney Plus njengamanje kungamaphesenti azungeze u- $ 6.99 ngenyanga noma cishe u- $ 69.99 unyaka wonke. Ongakwenza, ungakuzama ngaphambi kokuthenga ubulungu nge isilingo samahhala sezinsuku eziyi-7 isikhathi. Ngalokho, ungabona esivivinyweni uma ngabe ngabe ngabe ngabe ngabe ngabe ngabe ngabe ngabe ngabe ngabe yimisebenzi yakho le. Gcina engqondweni yakho ukuthi uma uhlela ukukhansela okubhaliselwe kuzofanele ukhansele ubulungu phakathi nesikhathi sesilingo ngakho-ke ngeke ukhokhiswe ngokubhalisile.
Kodwa-ke, uma ukhansela okubhalisile uma isikhathi sesivivinyo sesidlulile, ukubhalisa kwakho kuzoqhubeka kuze kube usuku olulandelayo lokukhokha okusho ukuthi luzosebenza kuze kube sekupheleni kwenyanga uma ukhethe uhlelo lwenyanga futhi kungenzeka kuze kube sekupheleni konyaka ukube ubukhethe inketho yaminyaka yonke. Kuzo zombili lezi zimo, uzokhokhiswa cishe u- $ 6.99 inyanga yonke noma cishe u- $ 69.99 unyaka wonke kuye ngohlelo obukhethe ukulukhetha.
Bhalisela i-Disney Plus Student Discount
Ungakukhansela Kanjani Ukubhaliswa Kwakho Kwe-Disney Plus?
Vakashela iwebhusayithi esemthethweni bese uqhafaza ku-Akhawunti ngaphansi kwePhrofayili.
Uma ufika lapho, kuzofanele uchofoze Imininingwane Yokukhokha. Ukusuka lapho, uzobona inketho yokukhansela ukubhalisa kwakho.
Uzothola inketho yokukhansela ephelele esikrinini futhi ekhombisa ukuthi unezinsuku ezingaki ngaphambi kokuphela komjikelezo wakho wokukhokha. Futhi usuqedile lapho. Esinye isikrini sizokubuza ukuthi kungani uthathe isinqumo sokukhansela okubhalisile.
Yilokho kuphela. Usuqedile. Uzothola ne-imeyili eqinisekisa ukukhanselwa. Uma uthatha isinqumo sokushintsha umqondo wakho, chofoza kunkinobho yokubhalisa kabusha ku-imeyili ukuze uqalise ukubhalisa kwakho futhi.
Ungasikhansela kanjani isivivinyo sakho samahhala seDisney Plus?
Inqubo iyefana. Uma uzoyikhansela ngaphambi kosuku lwakho lokuqala lokukhokha, uzojabulela isilingo sakho ngaphandle kokukhokhiswa ngisho indibilishi eyodwa. Uzothola umyalezo ngalokhu lapho beqala ukukucela ukuthi ufake imininingwane yekhadi lakho lesikweletu ngeDisney Plus.
Amasethingi wokukhansela okubhaliselwe kwe-Disney Plus kuzilungiselelo zakho ze-iPhone:
Ukube ububhalisele ukubhaliswa kweDisney Plus usebenzisa i-iPhone yakho noma enye idivayisi ye-Apple. Uma kunjalo, kuzofanele usebenzise idivaysi ye-Apple uma ufuna ukukhansela ukubhalisa kwakho. Kepha, lokho kulula kakhulu ukukwenza. Ungalandela lezi zinyathelo ukukhansela okubhaliselwe kwakho kwe-Disney Plus usebenzisa i-iPhone yakho noma enye i-Apple Device.
Vula uhlelo lokusebenza lwezilungiselelo kudivayisi yakho.
Chofoza igama lakho phezulu.
Khetha okubhaliselwe kusuka lapho.
Chofoza ku-Disney Plus.
Ukusuka lapho, chofoza ku-Khansela ukubhalisa.
Qaphela: Kulula ukukhansela okubhaliselwe kwe-Disney Plus kusuka kusiphequluli sewebhu.
Ungakukhansela kanjani okubhaliselwe kwe-Disney Plus ku-Google Play Isitolo kufoni yakho ye-Android?
Uma ubhalise ku-Disney Plus usebenzisa i-Google Play noma idivayisi ye-Android, ukukhansela okubhaliselwe kulula.
Okokuqala, udinga ukuvula uhlelo lokusebenza le-Google Play Isitolo kudivayisi yakho ye-Android.
Chofoza Imenyu bese ukhetha Okubhaliselwe kusuka lapho.
Khetha iDisney Plus.
Chofoza ku-Khansela ukubhalisa.
Ukukhansela i-akhawunti yakho ye-Disney Plus kuqondile uma nje wazi ukuthi udinga ukuyikhansela usebenzisa uhlobo olufanayo lwedivayisi obukade ulisebenzisela ukubhalisela okufanayo. Ngalokhu, kusho ukuthi ngabe ubhalise ku-Disney Plus usebenzisa isiphequluli sewebhu kwi-PC yakho noma kwi-laptop, udinga ukungena ngemvume kudivayisi efanayo ukukhansela okubhaliselwe kwakho kwe-Disney Plus.
Uma usukhansele okubhalisele, usazokwazi ukukufinyelela uze ufike ekugcineni komjikelezo wokukhokha. Ngakho-ke uma uhlela ukukhansela ukubhalisa kwakho, ungahle ufune ukuqiniseka ukuthi ungakwenza ngemuva komjikelezo, ngakho-ke usenenye inyanga ozoyibuka. Futhi uma kwenzeka ushintsha umqondo wakho futhi ufuna ukuqala futhi ungahlala uphinde ubhalise futhi emuva kwesikhathi ukuze ubuke uchungechunge olungapheli.
IHulu vs Sling TV - Yikuphi Okuhamba phambili?
Ezinye izindlela ze-Pluto TV
Isaphulelo Somfundi We-Apple Music (2020)
Izinsizakalo ezihamba phambili ze-VPN ngo-2020 - Ezingu-10 Eziphezulu Eziphephe Kakhulu
amageyimu we-roblox akangeni ngemvume
kungani amavidiyo evinjelwe ezweni lami
indwayimane engcono noma i-youtube tv
pokemon red ivuliwe esikoleni
Ngingabuka kuphi ama-hd movie online mahhala